करिश्माको आक्रोश: के सबै समस्या कलाकारले समाधान गर्नुपर्ने ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
काठमाडौं । कोरोनाको महामारीले विश्वलाई आतंकित बनाएको छ । यसबिरुद्ध लड्न हरेक देशका कलाकाहरुले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । बलिउडका कलाकारले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको समाचार चारै तिर मिडियामा देख्न पाइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली कलाकारले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने समाचार केही मिडियाले बनाएका छन् । केही मिडियाले कलाकार मौन बसेको भन्दै आलोचना समेत गरेको देख्न सकिन्छ । उक्त अलोचना प्रति अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर भने आगो भएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस पोष्ट गर्दै सबै समस्याको समाधान कलाकारले गर्नुपर्ने हो भन्दै आक्रोस ब्यक्ति गरेकी छन् ।
करिश्माले लेखेकी छन्, ‘के भनेको के ? के सेलिब्रेटीले सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो ? अनि के काम सरकारको ?’ करिश्माले आफुहरु धुर्मुस सुन्तली, रबि लामिछाने हौ र भनेर प्रश्न गर्दै भगवानलाई खोज्न आग्रह समेत गरेकी छन् । उनले घुमाउरो पारामा यस्तै समस्याको समाधानका लागि आफुहरुले भोट गरेको समेत बताएकी छन् ।
. ओली र राष्ट्रपतिको कदमप्रति करिश्मा भन्छिन् : ‘कठै बरा हामी नेपाली जनता’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, वैशाख ३ २०७७ १८:१४:११